Ukutya okume nkqo, yintoni kwaye kwenziwa njani? Fumanisa i-Intanethi ▷ ➡️ kwi-Intanethi
Ukufumana ukutya okufanelekileyo kunokuba yinkqubo ende njengokufumana ijean efanelekileyo, kuba imalunga nento esebenza kakuhle kumzimba ngamnye.
Kuphando lwakho lwesicwangciso esifanelekileyo sokutya, uqinisekile ukuba unokufumana izidlo ezibonakala zinengqiqo, njengokutya kweMeditera, kunye nezinye ezivakala zigqithile, njengokutya kweqanda. Ke ngoku ukutya okuthe nkqo kungena phi?
Ukutya okuthe nkqo yeyona ndlela kuxoxwa ngayo kakhulu kwiindawo zokuzilolonga zomzuzu kunye nezona zithandwa kakhulu ziingcali zeCrossfit.
Isicwangciso senziwe ngumakhi womzimba uStan Efferding, kwaye ukuba unokuqikelela ngokutya abalandeli, kungakumbi ngokusebenza kunobuhle.
1 Kukuthini ukutya okuthe nkqo?
2 Ngubani onokuyenza?
Kukuthini ukutya okuthe nkqo?
UStan Efferding ubiza ukutya okuthe tye "sisakhiwo esisekwe ekusebenzeni," kodwa ngokungafaniyo neendlela ezininzi, ususa ugxininiso kwii-macronutrients (iicarbohydrate, iiproteni, kunye namafutha) okanye iikhalori kwaye azibeke kwimicronutrients ezinjengeevithamini. Kunye neeminerali.
Isakhiwo sakhiwe ngokuma kweT. Inxalenye ende yesiseko yenziwe ngokutya okumile kwinqanaba: iivithamini, iiminerali kunye nee-antioxidants ezinyibilika ngokulula kwaye kufuneka zonyuse ukusebenza kwejim.
Oku kutya lubisi, imifuno, amaqanda, isalmon kunye neetapile.
Icandelo elithe nkqo kulapho esi sicwangciso senzelwe iqela elithile labantu abaneenjongo ezithile. Kulapho ukonyusa khona iikhalori zakho, ngesiqhelo ngokutya irayisi kunye nenyama ebomvu.
Nangona iwebhusayithi esemthethweni yale ndlela idwelisa amadoda, abafazi kunye nabantwana njengabagqatswa abafanelekileyo bokutya, uninzi lolu luhlu lubandakanya abantu ekufuneka bexhalabile ngokusebenza kwindawo yokuzivocavoca, eyakha umzimba kunye nomlwi weMMA.
Okwangoku, inesiseko esomeleleyo sesondlo kunye nokugxila kukutya okupheleleyo- kuhlala kuyibhonasi.
Isixa serayisi kunye nenyama ebomvu oyongezayo ekutyeni kwakho kwemihla ngemihla kuya kuxhomekeka nje kwiinjongo zakho, nokuba kukwandisa ukusebenza kokuphakamisa ubunzima, ukuphulukana namafutha ngelixa ugcina izihlunu, okanye ukunciphisa umzimba nje.
Ukutya okuthe nkqo kubonelela ngeendlela ezahlukeneyo zokuphila, kubandakanya abantu abathanda ukutya ii-carbohydrate ezisezantsi (i-carb ephantsi), abo bazila ukutya rhoqo, kunye nabalandeli bePaleolithic Diet.
Ukongeza, iya kuba neeproteni ezininzi kunye nemifuno kwaye izondlo zayo kufuneka zigqunywe ngombulelo kwisiseko sokutya siphela.